ဂျူနီယာဝင်း – လူသူဝေးကွာ ရိပ်သာယာ အီးဘုတ်ထွက်ပြီ – MoeMaKa Burmese News & Media
ဂျူနီယာဝင်း – လူသူဝေးကွာ ရိပ်သာယာ အီးဘုတ်ထွက်ပြီ
(မိုးမခစာအုပ်စင်) မတ် ၄၊ ၂၀၁၆
A Memory of My Grandparents စာအုပ်ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သော ‘လူသူဝေးကွာ ရိပ်သာယာ’ စာအုပ်အခုတော့ ကင်ဒဲလ်စာအုပ်စင်မှာ အီးဘုတ်ထွက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သည်စာအုပ်မြန်မာပြည်မှာ ထွက်တော့ စာဖတ်သူများဆီက စကားသံများ ရရှိလာပါသည်။ ‘ဆရာမစာအုပ်က ဖတ်လို့တော့ ကောင်းပါရဲ့ စာလုံးပေါင်းများ မှားလွန်း’ …… စသဖြင့် များစွာသော အသံများ ကြားလိုက်ရပါသည်။ သည်တော့ ကမန်းကတန်း စာအုပ်ကို ကောက်လှန်၊ ကိုယ့်အမှားကိုယ်ရှာ ဆိုတော့ ဘာအမှားမှရှာမတွေ့။ ဒါနဲ့ နီးစပ်ရာများ လိုက်မေး၊ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံစာအုပ်ကို လှန်ပြီး လျောက်ရှာကြည့်ရင်းနဲ့ ၊ ဟိုလူဒီလူ့ဆီက အမှားများ ထောက်ပြတာတွေကို ကောက်ရေးထားပြီး သတ်ပုံစာအုပ်နဲ့ စစ်ကြည့်လိုက်တော့မှ …..။ စာအုပ်ထဲ အမှားတွေ မှင်နီနဲ့ ၀ိုင်းရင်း ၀ိုင်းရင်းနဲ့ တစ်အုပ်လုံး မှင်နီများ ပြည့်သွားပါတော့သည်။
ဒါ ကျွန်မတစ်ဦးတည်း၏ အပြစ်သာဖြစ်ပါသည်။ လေးအောက်ဒီဇိုင်းများကို သူများအပ်ရင် အမှားပါမှာစိုးလို့ ကိုယ်တိုင်ရိုက် ကိုယ်တိုင်လုပ်၊ အားလုံးပြီးတော့ တခါ ဖောင့်ကိုပြန်ပြင်ရပြန်တော့ ပြန်မှားတာတွေ ထပ်ပြင်။ ပြင်ပြီးတော့ မိသားစုတွင်းမှာပဲ စကားလုံးအထပ်များ မမှားအောင် သေချာစီစစ်လိုက်ပြီး အမှားကင်းပီရယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ်ကြိ်မ် …….. ….. ထုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့လေ….. အမှားများပြင်ပြီးသားနဲ့ ထွက်လာမှာပါလို့ပဲ ကတိစကားဆိုပါရစေတော့။
ယခုထွက်လာတဲ့အီးဘုတ်ကတော့ အမှားပြင်ပြီးသားပါ။ (သို့သော်လဲ အမှားလဲ ပါနိုင်ပါသေးတယ်လေ။)
← ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – တောင်းဆိုး ပလုံးဆိုးတွေနဲ့ တမတ်လွှတ်တော်
မောင်မောင်စိုး – တအန်း ပလောင်နှင့် TNLA – အပိုင်း (၁၁) →
စာအုပ်စင် တင်မိုး ဓာတ်ပုံသတင်း
One thought on “ဂျူနီယာဝင်း – လူသူဝေးကွာ ရိပ်သာယာ အီးဘုတ်ထွက်ပြီ”
I think you should have it proof read byaprofessional or two. That s how we have to do it here. Even foraproject for school, we need spell check. Esp for grandparents ” sake.